Ungasenza Kanjani Isibhengezo Se-Youtube? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
May 12, 2021 0 Comentarios 490
Ukufunda ukwenza ngezifiso isiteshi sakho se-YouTube kubaluleke kakhulu uma sifuna ukukhula ngaphakathi kwale nkundla yevidiyo edumile. Uma ucabanga ukuzinikela ngokuphelele ekudalweni kokuqukethwe kuyadingeka ukuthi uqale ngokuba nesiteshi esakhiwe kahle ngokuhlelekile.
Esihlokweni sethu ku Namuhla sizokukhombisa amathiphu asebenzisekayo azokusiza ukuthi wakhe isibhengezo esifanelekile sesiteshi sakho se-YouTube. Njengamanje kunamathuluzi ahlukile angakusiza ukuklama isibhengezo esihle kakhulu, futhi lapha sizokhuluma ngamanye awo.
Lokhu kungenye yezinto ezimqoka okumele sizazi ngaphambi kokufunda indlela yokwenza isibhengezo se-Youtube. Uma sikhuluma ngegama elithi "isibhengezo" sisuke sibhekisa ohlotsheni lwesithombe esivelele esikhonza ukukhomba isiteshi esithile.
Isibhengezo sibonakala, phakathi kwezinye izinto, ngobukhulu bayo obuphawulekayo. Lokhu kungenye yomehluko omkhulu uma kuqhathaniswa nesithombe sephrofayela noma i-logo evame ukuba mincane futhi iqonde kakhulu. Isibhengezo siphezulu phezulu kwesiteshi sethu.
Isibhengezo esakhiwe kahle Kungaba yi-hook ephelele ukubamba ababhalisile abasha besiteshi sethu. Kungakho kubalulekile ukuthi ufunde ukuthi ungakha kanjani eyangempela, ehlabayo nehehayo emehlweni omphakathi. Ngale ndlela sizofinyelela endaweni engcono yomkhiqizo wethu.
Sonke singaba nesibhengezo sethu
Kukhona labo ababheka ukuthi ukwenza i-banner kungumsebenzi wemikhiqizo yebhizinisi kuphelaNoma kunjalo, sonke singaba neyodwa. Abantu bangaba nomkhiqizo wabo uqobo futhi kufanele sinikele isikhathi kuwo ukufeza ukukhula esikhathini esimaphakathi neside.
Uma unesiteshi sakho ngaphakathi kwe-YouTube, kubalulekile ukuthi uqale ukufaka isandiso ngasinye se- izakhi ezikhomba umkhiqizo wakho, isibonelo:
Ungasenza kanjani isibhengezo esihle kakhulu
Lapho udala isibhengezo esihle kakhulu se-YouTube, kuyadingeka ukuthi ubheke izici ezimbalwa ezibalulekile, kufaka phakathi ukucabanga kwethu nobuciko.. Masingakhohlwa ukuthi ukwenza isibhengezo kuyinkinga yokuklama, ngakho-ke ukuqamba kubalulekile.
Kubalulekile futhi ukukhetha uhlelo oluhle lokuklama noma uhlelo lokusebenza. Ngenhlanhla kuwebhu sithola ezinye izindlela eziningi, ezinye zazo zikhululekile ngokuphelele. Zama uku khetha uhlelo lokusebenza olunikeza izifanekiso ezenziwe ngomumo, lapho kufanele ushintshe imininingwane emincane kuphela.
Kubalulekile unakekele ubukhulu besibhengezo sethu Okwe-Youtube. Khumbula ukuthi kuya ngokuthi iyiphi idivayisi ekubonayo ukuthi isibhengezo sakho sizobukeka kanjani. Futhi kuyisihluthulelo ukwazi ukuthi ulusebenzisa kanjani uhlobo lombala, ifonti nosayizi wezithombe ozozifaka ku-banner yakho.
Ngabe ungafaka okuthile amagama achaza isiteshi sakho. Ngakho-ke abantu bazoba nokubuka kafushane ngezihloko ozithuthukisayo kokuqukethwe kwakho futhi bangabhalisela uma kwenzeka bezizwa beheheka.
Izinyathelo zokulayisha isibhengezo ku-Youtube
Yenza chofoza mayelana nesithombe sakho sephrofayela
Chofoza ku- "Isiteshi sakho"
Izindawo isigaba sokuklama bese ulayishe isibhengezo osakhele isiteshi sakho.
1 Yini ibhena?
2 Ungasenza kanjani isibhengezo esihle kakhulu
3 Izinyathelo zokulayisha isibhengezo ku-Youtube
Ungayilanda kanjani ividiyo ye-YouTube yePowerPoint?